Wasiirada arrimaha dibada Amina Maxamad oo sheegtay in ay tahay shaqsiga ugu wanagsan ee horumar gaarsiin karo midowga AU-da – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiirada arrimaha dibada Amina Maxamad oo sheegtay in ay tahay shaqsiga ugu wanagsan ee horumar gaarsiin karo midowga AU-da
Wasiirada arrimaha dibada iyo ganacsiga caalamiga ee dalkani Kenya marwo Amina Mohamed ayaa sheegtay in ay tahay qofka ugu habboon e midowga Africa u horseedi karo in laga dhex aqoonsado siyaasada caalamiga.
In ka badan 30 sano oo ay arrimaha caalamiga ah ka dshaqeyneysay ayey wasiirada sheegtay in ay ka dhigtay hogaamiya leh khibrad xeel dheer oo la xiriirta isdhexgalka iyo midnimada qaarada Afrika.
Waxaqabadkeyga waxaan muujiyay xiliyadii ugu adkaa oo ay Afrika soo marto ayey hadalkeeda raacisay Amina Maxamad.
Dhanka kale waxay xustay in ay waaya aragnimadeeda adeegsan doono si ay uga shaqeyso iskaashi ka dhexeya wadamada qaarada iyo in sido kale Afrika ay noqoto qaarad laga aqoonsayahay horumarkeedana loogaga hadlo guud ahaan caalamka.
Sarakiil sar sare oo dowlada ka tirsan oo uu hogaaminayo madaxweyne ku xigeenka dalkaWilliam Ruto ayaa wadamo kala duwan safari ku marayo si ay tageero ugu helaan guddomiyanimada Amina maxamad.
Marwada koowad ee wadanka koonfur Afrika Nkosazana Dlamini-Zuma ayaa hada ah guddoomiyaha midowga Afrika ee loo soo gaabiyo AU-da.
Bisha Koowad ee sanadka 2017-ka ayaa lafilaya in doorashada xilkan uu qof kale kula wareegayo la qabto.
Fariinta Kenya ee la xiriira xilka ugu sareeya ee midowga Afrika ayaa ah in wasiirada arrimaha dibada ee Amina Maxamad ay gacan ka geysan doonto horumarinta ganacsiga ka dhexeya wadamada qaarada,. Isdhexgalka, la tacaalida arrimaha amni darada iyo Afrika oo lahaato cod la maqlo lana tixgeliyo.
← Gudiga EACC oo hor istaagay in lacag kor u dhafeyso 800 oo milyan la siiyo shirkad baaritaano lagu wado
Ku xigeenkii hore ee Agaasimaha guud ee NYS iyo guddomiyihii hore ee gudiga qandarasyada wasarada dowlad wadaajinta oo dacwad lagu soo oogayo →